स–साना कारणहरु, जसले मान्छेमा प्रेम भावना टुट्छ !! | सुदुरपश्चिम खबर
स–साना कारणहरु, जसले मान्छेमा प्रेम भावना टुट्छ !!
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : भदौ १३, २०७८ 10
कतिपय मान्छेको स्वभाव के हुन्छ भने, अरुको गल्ती खोज्ने । अरुको कमजोरीमाथि बढी चियोचर्चा गर्ने । यस किसिमको स्वभाव नै बाधक हो, प्रेम सम्बन्धका लागि । मान्छेमा कुनै न कुनै कमजोरी हुन्छ । सबै मान्छे सबै कुरामा पोख्त हुँदैनन् । मान्छेहरु सर्वगुणले सम्पन्न हुँदैन । त्यसैले अरुको कमजोरी खोज्ने प्रवृत्तिले प्रेम होइन, घृणा बढाउँछ । अनलाइनखबर बाट सभार